စည်သွတ်အစားအစာ၏ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုကို ဖော်ထုတ်ပါ - သတင်း - Hebei Oceane Import And Export Trading Co., LTD.
စည်သွတ်ဘူး ဆိုတာ ဘာလဲ။
စည်သွတ်အစာအဖြစ် ပြုလုပ်ရန်အတွက် အလုံပိတ်နိုင်သော ကွန်တိန်နာတစ်ခု (ပေါင်းစပ်ဖလင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ပျော့ပျောင်းသောအိတ်အပါအဝင်) ပါရှိသည်။ အိတ်ဇော၊ အလုံပိတ်၊ ပိုးသတ်ခြင်းနှင့် အအေးပေးခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းစဉ်လေးရပ်ကို ဖြတ်သန်းရမည်ဖြစ်သည်။ သီအိုရီအရ၊ ရောဂါပိုးရှိသော ဘက်တီးရီးယားများကို သတ်ပစ်ရန်၊ ပုပ်သိုးနေသော ဘက်တီးရီးယားများ၊ ဝမ်းသွားပိုးမွှားများနှင့် အင်ဇိုင်းများကို အသက်မသွင်းရန် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
အသုံးအများဆုံး စည်သွတ်ဘူးများ မှာ-
1. စည်သွတ်အသားများဖြစ်သော စည်သွတ်ပြုတ်ဝက်သား၊ စည်သွတ်ပြုတ်ထားသော အမဲသား၊ တူနာစည်သွတ်ဘူး စသည်တို့။
2. စည်သွတ်ဘူးများဖြစ်သော မက်မွန်သီး၊ စည်သွတ်ဘူး လိမ္မော်သီး စသည်တို့ကဲ့သို့ စည်သွတ်ထားသော သစ်သီးများ။
3. စည်သွတ်ဘူးများဖြစ်သော ဂေါ်ဖီထုပ်ချဉ်၊ ပဲခြောက်စသည်ဖြင့် စည်သွတ်ထားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊
စည်သွတ်ဘူးတွေကို ဘာကြောင့် ဒီလောက်ကြာအောင် သိမ်းထားနိုင်တာလဲ။ ကြာရှည်ခံပစ္စည်းတွေ အများကြီးထည့်ထားသလား။
မဟုတ်ဘူး! ဗူးခွံများသည် တစ်နှစ်၊ တစ်နှစ်ခွဲ သို့မဟုတ် နှစ်အနည်းငယ်ကြာအောင် ကြာရှည်ခံနိုင်သော အကြောင်းရင်းမှာ ကြာရှည်ခံပစ္စည်းများကြောင့်မဟုတ်ဘဲ လုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ စည်သွပ်ဘူး ကုန်ကြမ်းများကို ဦးစွာပိုးသတ်သင့်ပြီး ပိုးသတ်ဆေးကန်ထဲသို့ထည့်ကာ ပူနေချိန်တွင် အလုံပိတ်၊ အအေးခံပြီးနောက် ပုလင်းအတွင်းရှိ ဖိအားသည် ပုလင်းပါးစပ်ကို ပိုမိုတင်းကျပ်လာစေသည် (thermal expansion and cold contraction principle) နှင့် ပြင်ပဘက်တီးရီးယားများ၊ ဝင်လို့မရဘူး။ ဤနည်းဖြင့် တင်းကြပ်စွာပြုလုပ်ထားသော ဘူးသည် ကြာရှည်ခံပစ္စည်းများမပါဘဲ နှစ်နှစ် သို့မဟုတ် သုံးနှစ်ကြာအောင် မပျက်စီးနိုင်သောကြောင့် ကြာရှည်ခံရန် မလိုအပ်ပါ။
စည်သွတ်ဘူးတွေက အာဟာရမပြည့်တဲ့ အစုတ်အစားအစာလား။
မဟုတ်ဘူး! တကယ်တော့ ဗူးကို များသောအားဖြင့် ပိုးသတ်ဆေးနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် အပူအပူချိန်က သိပ်မမြင့်ဘဲ ယေဘုယျအားဖြင့် 150 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက် မပိုစေဘဲ ဗူးရဲ့ အာဟာရကို ပိုသေချာစေပြီး အိမ်မှာ ချက်ပြုတ်ရတာကြောင့် ချက်ပြုတ်တဲ့ အပူချိန်ထက် ပိုလွယ်ပါတယ်။ 200 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်။
လက်ရှိတွင် စည်သွတ်ဘူးများသည် အစားအစာထောက်ပံ့မှု ကြပ်တည်းလာသောအခါ ရိုးရှင်းသော အစားထိုးမဟုတ်တော့ဘဲ လုပ်ငန်းရှင်များက စားသုံးသူများအား အိမ်တွင် ချက်ပြုတ်ထားသော အရသာကို ပေးစွမ်းနိုင်စေရန် ကြိုးပမ်းနေကြသောကြောင့် စည်သွတ်အစားအစာများကို တစ်နေ့လျှင် ဟင်းသီး ဟင်းရွက်၊ သစ်သီးများ၊ အသားများ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ အပါအဝင် အဆင်သင့်သုံးနပ်ရိက္ခာများ အပါအဝင် တစ်နေ့လျှင် သုံးနပ်စာ အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်၊ ဒါပေါ်မှာ။
ယခင်က အသုံးပြုခဲ့သည့် သံပြားနှင့် ဖန်ဗူးများကို ပိုမိုအဆင်ပြေပြီး လက်တွေ့ကျသော သံဗူးများ၊ အလူမီနီယံ နှစ်လွှာအတိမ်ပိုင်း ရေဆေးဗူးများနှင့် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်မီးဖိုများဖြင့် အပူပေးထားသော ပလပ်စတစ်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော ပန်းကန်ပြားများဖြင့် အစားထိုးထားပါသည်။
လွန်ခဲ့သော:လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ရုံသို့ လာရောက်လည်ပတ်ကြသည်။